प्रिय नगर 'घाटी'लाई पत्र
प्रिय नगर 'घाटी '
भला छु, भलाकै कामना गर्दछु ।
मैले तिमीलाई नगरकोटी भन्नुपर्ने । सकल लोकले तिमीलाई नगरकोटी नै भन्छ किनकि तिमी कोट मन पराउँछौ ! लरतरो कोट होइन, ओभरकोट । मैले तिमीलाई कोट लगाएको देखेको पनि छैन । लेखक अवतारमा प्रकट भए उपरान्त तिमीले कोटलाई कसोकसो लात नै मारिदियौ । तिम्रा आलोचकले तिमीलाई ओभरकाेट लगाएरै ओभररेटेड हुन सकेको साहित्यकार भन्दा हुन् । विचराहरू न कोट त्याग्न सक्छन, न ओभरकोट अँगाल्न, ओभररेटेड हुनु धेरै परको कुरा । खासमा तिमी नगर 'ओभर 'कोटी हुनुपर्ने ।
त्यसो त तिमी कसरी नगरकोटी बन्यौ ? त्यसबारेमा तिमीले लामो गन्थन कतै लेखिसकेका छौ । मैले यति उल्लेख गरिसकेपछि तिमी आफू नगरकोटी कसरी रहन गएको भन्नेबारेमा नपढेको तिम्रो फ्यानले फेरि खोजेर पढ्ने कोसिस गर्ला ।
कुमार त तिमी यसै पनि छौ, किनकि तिम्रा फ्यानहरूले तिम्रो साहित्यलाई कुमार पाउञ्जेल वा मानुञ्जेल तिमी कुमार रहिरहनेछौ । म भर्जिन र भर्जिनिटीको धेरै उल्लेख गर्न चाहन्नँ । त्यो सेक्सी भै जाला फेरि ।
एउटा लेखक आफ्ना प्रत्येक नूतन रचनामा नयाँपन दिन सक्नेजति कुमार रहिराख्नुपर्दछ । कुनै पनि लेखक आफ्नो लेखनीमा प्रौढ नभई त्यो स्तर कायम गर्न सक्दैन, त्यति म ठोकेर भन्न सक्छु । तिमीले नै मुराकामीलाई उदृत गर्दै इसिगुरोलाई प्रत्येक नयाँ पुस्तकमा कुमार रहिरहन सक्ने भनेका छौ । नोबेल पुरस्कार पर्खिबसेको वा नोबेलले पर्खिबसेको मुराकामीसामु नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको इसिगुरो तिमीलाई मन नपर्नु अर्कै कुरा । यस्ता विरोधाभासहरू उल्लेख गरी साध्य नहोला ।
अँ साँच्ची, मैले तिमीलाई नगर 'घाटी' किन भनेँ भन्दाखेरी तिमी खासमा घाटीजस्तै सुन्दर छौ । घाटीको मतलब उपत्यका हुन्छ । सायद मैले घाटी भन्ने शब्दसँग पहिलो साक्षात्कार सिन्धु घाटीको सभ्यता भन्ने यस्तै शीर्षकमा सभ्यताहरूको पाठमा कतै पढेको थिएँ निकै वर्षअगाडि, सायद स्कुले दिनमा थियो । एउटा बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थी भए पनि सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक विचरण गर्नु मेरो सोख थियो । होइन भने Triangle लाई त्रिभुज भन्न वा parallel लाइनलाई समानान्तर रेखा भन्न मलाई निकै पछिसम्म मुस्किल पर्ने थियो ।
मलाई तिमी नेपाली साहित्यको सुन्दर घाटीजस्तै लाग्छ । त्यही भएर मैले तिमीलाई उपत्यका भनेको हुँ । तिमी गाउँहरूको उपत्यका नभएर गाउँ र नगरहरूको सुरम्य उपत्यका हौ । तिम्रो लेखनीको वास्तुमा नगर चेतना प्रबल देखिन्छ । त्यसैले मैले तिमीलाई नगर घाटी भनेको हुँ । यसमा तिम्रो आपत्ति नरहला, तिम्रा पाठकहरू त यसै पनि मखलेल हुनेछन्, किनकि मैले तिमीलाई नयाँ नाम दिएको छु । उनीहरू झस्किने छैनन् । तर, उनीहरू पनि यस्तै अरु नाम जुराउन अभिशप्त बने भने तिमीलाई फाइदा नै हुनेछ । यसै पनि तिमी पात्रहरूको विचित्र शैलीमा नाम juxtapose गरिरहेका हुन्छौ ।
प्रिय नगर घाटी,
कहिलेकाहीँ तिमीले लेखेका लेखहरू तिमी स्वयम् जुकरबर्गले खोलिदिएको मेरो पत्र मञ्जुषामा खसालिदिन्छौ, त्यसो नहुँदा मैले तिम्रो लेखबाट मलाई मनपर्ने लाइनहरू तिम्रो पत्र मञ्जुषामा खसालिदिएको हुन्छु । सके त कहिलेकाहीँ ट्वीट पनि मारेको हुन्छु, नभए जुकरबर्ग भित्तामा टाँगिदिएको पनि हुन्छु । मलाई यस्तो एकोहोरी वा दोहोरी रमाइलाे नै लाग्छ । काठमाडौंका अन्यान्य घाटहरूमा (पशुपतिको घाटमा बाहेक) अन्यत्र हामीले धेरै पटक भेटेका पनि छौ । म काठमाडौं घाटीका अन्यान्य घाटहरूबाट केही वर्षदेखि धेरै टाढा छु । मैले हालै मात्र क्यालिफोर्नियाको सान्फ्रान्सिस्को घाटीको तटबाट प्रशान्त महासागरलाई देखेर फर्केको छु ।
तिम्रो गत वर्ष पढेका २५ वटा पुस्तकसम्बन्धी पछिल्लो रचना म क्यालिफोर्नियाको यात्रामा जानुभन्दा पहिले तिमीले मलाई पठाएका थियौ । म एस्तो अस्तव्यस्त भएँ कि आफूलाई मनपसंद लेखकको उसैले पठाएको लिंक पनि मैले खोलेर पढ्ने फुर्सद निकाल्न सकिरहेको थिइनँ । तिमी आफैँ अनुमान गर्न सक्छौँ, म कति र कता हराएको थिएँ हुँला ।
प्रिय नगर 'घाटी',
मैले यस्तो व्यक्तिलाई भेट्दै थिएँ, जसलाई भेटेको तस्वीर मैले फेसबुकमा वा ट्विटरमा पोस्ट गर्न सक्दिनथेँ कुनै राजनीतिक कारणले । एउटा बौद्धिक बनिटोपलेको व्यक्तिले अर्को बौद्धिकलाई भेटेको फोटो मैले जुकरबर्गको भित्तामा टाँगन सकिनँ । खराब समय छ, नेपालको भूराजनीतिभन्दा पनि धेरै खराब ।
यो नयाँ वर्षको सन्ध्यामा त्यो 'पोर्न लाइन'उन्मुख राजनीतिबाट देशलाई निकाल्ने तिम्रो उत्कट चाहना पूरा होस् । अनि political parties animal हरू political animal मात्र रहन सकून् । तर, ध्रुवीकरण यति छ कि तिमीले तिनका उपर लेखनीमा अझै हिंस्रक हुनुपर्नेछ । हाय रे !
यस्तो बेला तिमीले ठूलो साहित्यकार मानेको ग्याब्रियल गर्सिया मार्खेजले उसको उपन्यासका लागि नसम्झिनु, सम्झिनु मात्र मलाई मेरो अखबारी लेखनका लागि भने उल्लेख गरेको पुस्तक तिमीले पनि पढेछौ । मैले उनका अखबारी लेखन संकलित गरिएको Greatest scandal of 21st century and other writings पुस्तक पढ्ने अवसर पाएको थिएँ ।
तिमीलाई थाहा छ, मैले पत्रकारिता अत्यन्तै कम गरेँ अथवा गरिनँ नै भने पनि हुन्छ तर म पत्रकारिताको विद्यार्थी थिएँ र हुँ पनि । त्यो पनि अन्यत्र कहीँ नभएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभागको । म बाइलाइन र डेटलाइनसहितको पत्रकार नबनीकन एकै पटक स्तम्भकार बनेर झुल्किएँ । त्यसको अर्को 'दोचा' बन्न सक्छ ।तिमीले मलाई झुल्के स्तम्भकारका रूपमा हिमाल खबरमै पढ्यौ वा नोटिस गर्‍यौ कि !
कथा उपन्यास छाडेर तिमी अनेक फन्डा गर्छौ । तिमी नाटक लेख्छौ, कविता लेख्छौ, गीत लेख्छौ, त्यो पनि आफूले जाने जति भाषामा लेखिबस्छौ, भाषाको तिम्लाई बन्धन छैन । खासमा तिमी निर्बन्ध भएर लेख्न सक्छौ । जे गर्छौ, निस्फिक्री गर्छौ । हिजो अस्ति मात्रै तिमी मोडेल भएको गीत पनि हेरिसकेँ । तिमीले नाटक गरेउ होइन, खेलेउ नै ।
तिम्रो पहिलो नाटक Coma A Political Sex ले मलाई मन्त्रमुग्ध मात्र पारेको थिएन, म disturbed समेत भएको थिएँ । त्यसपछि एउटा सानो टिप्पणीजस्तै केही लेखेर मात्र म शान्त भएको थिएँ । म परिबन्धले सम्पादक भएको एउटा साप्ताहिक पत्रिका 'सरोकार टुडे 'मा त्यो छापिएको थियो । त्यसलाई सङ्कलित गरेर Coma A Political sex पुस्तकमा समाविष्ट पनि गरेका छन् क्यारे, शिल्पी थियटरका घिमिरे युवराजले ।
विख्यात सुपरमोडेल पद्मालक्ष्मीको आत्मकथा Love, Loss And What We Ate को समीक्षा लेखेको थिएँ हिमाल खबरमै, तिमीले त्यो विशेष नोट गरेका रहेछौ ।राजनीतिक टिप्पणी लेखिबस्ने मान्छे अकस्मात् मोडेलको पुस्तकबारे लेखेको देख्दा तिमी विस्मित हुनु स्वाभाविक नै थियो । शेखर खरेलले समेत त्यो पुस्तकको अन्यत्र कतै समीक्षा लेख्नुभयो । मलाई थाहा छैन, उक्त पुस्तकले काठमाडौंको खाल्डोमा प्रवेश पायो कि पाएन ।
तिमीले मलाई राजनीतिक टिप्पणीका अलावा मौलिक र स्वतन्त्र लेखनमा अभिप्रेरित पनि गरेका थियौ । म यति अल्मस्त छु कि तिमीले भनेको पाँच वर्षसम्म मैले यसो गर्न सकेको छैन । त्यसमा मलाई ग्लानि ओ ग्लानि छ । तर, मैले कोरा राजनीतिलाई साहित्यिक क्लेबरमा लेख्ने जमर्को गरेँ । त्यही कोसिसअन्तर्गत नवराज विकसम्बन्धी लेख औधी मन पनि पारियो ।
सञ्जीव उप्रेतीकृत पछिल्लो उपन्यास 'हंस' पढेका पाठकले मैले तिमीलाई नगर 'घाटी' भनेर सम्बोधन गर्दा उनीहरूले कदाचित् जारको घाँटी सम्झेको हुनुपर्छ । प्रज्ञाको नेपाली शब्दकोशमा भएअनुसार 'घाँटी' र 'घाटी' समानार्थी शब्दसमेत हुन् ।
उप्रेती अहिंसक र समतामूलक समाज चिन्तनका मनुवा भैकन यस्तो हिंसात्मक सेटिङ गराएका छन्, उपन्यासमा हिंसात्मक सेटिङले पाठकलाई जादुई शैलीले यसरी तानेर राख्छ कि पाठकले उपन्यास पढिसक्दा त्यो घाँटीले दिमाग चकाराएर राख्छ ।
अरूले नसम्झे पनि मैले नै उनीहरूका लागि बोनस स्वरूप त्यो घाँटी यहाँ सम्झिँदै छु । हेर त कत्रो प्रभाव छ, त्यो जारको घाँटीको । तर, तिमी 'हंस' को कविले बोकी हिँडेको भोजपुरे खुकुरीको निशानामा रहेको जारको घाँटी नभएर अर्कै घाटी परेऊ- सुन्दै, देख्दै, पढ्दै जे गरे पनि आनन्द आउने ।
मेरा लेखेर सक्नुपर्ने अनेक कुराहरू छन् तर किन मलाई आज तिमीलाई मञ्जुषा गर्नमै मज्जा लागिरहेछ । यो 'मजा लाग्यो' भन्ने शब्द ऋचा शर्माले कमेडी शोमार्फत थप कलात्मक बनाएकी छन् । ती मजा मानेर नै मज्जा लाग्यो भन्छिन् । रियालिटी शो आफैँमा बनावटी हुन्छन् । तैपनि जज बनेकी ती नायिकाले जब मुस्कुराउँदै मज्जा आयो भन्छिन्, त्यो मलाई बहुत खूबसूरत लाग्छ ।
नपत्याए तिमीले आफैँले पनि हेर्न सक्छौ । तिमी यस्ता सानातिना घटनासँग आफैँ वाकिफ रहन्छौ नै । तिमी कालो वस्त्र पहिरिने पनि, जिन्दगी र प्रकृतिको 'ग्रे जोन' खोजी हिँड्ने डुमेरो जो परेउ । श्वेत वस्त्रमा तिम्रा तस्वीरहरू यत्रतत्र देखिन लागेका छन् । अब तिमी विस्तारै इन्द्रेणी बन्दै जानेछौ/गइरहेछौ ।
मैले यहाँ पुस्तक मेलामा तिमीलाई नै सम्झेर तिमीलाई उपहार पठाउन भनी Einstein in love भन्ने पुस्तक खरिद गरेको थिएँ । त्यस पुस्तकको कभर मैले तिमीलाई पठाएँ कि जस्तो लाग्छ । खासमा मैले त्यो पुस्तक उपहारस्वरुप तिमीलाई सरप्राइज पठाउन चाहन्थेँ, तर ज्याद्रो कोरोनाले बित्याँस पारिहाल्यो ।
अहिले मलाई अर्को पुस्तक Who You're Reading When You Read Haruki Murakami पठाउनु मन छ । त्यो मैले अर्डर गरिराखेको छु । यो पुस्तक पढ्दा था'हुन्छ– हामी मुरकामी भनेर कसकसलाई पढिरहेका हुन्छौँ । तैपनि हामी मुरकामीसँग यति विधि प्रेममा परेका हुन्छौँ कि त्यो पढ्ने र यथार्थ आत्मसात् गर्न हामी चाहँदैनौँ ।
बुद्धिसागरले तिमीलाई थाहै नदिईकन यो पुस्तक पढिसकेको भए मेरो केही भन्नु हुने छैन । किनकि बुद्धिसागरको पुस्तक अनुदित भएर अंग्रेजी भाषामा आउँदै छ । फेरि तिम्रो पुस्तक अनुवाद गर्छु भनेर अहिलेसम्म कोही 'माइके लाल' आइसकेका छैनन्, त्यसमाथि तिमी बुद्धिसागर परेनौ ।
अनुवादका लागि माइकल हटकै लटरी वा संयोग सबैलाई पर्दैन । तिमीलाई अनुवाद गर्ने मुड चलेमा तिमी आफैँ अनुवाद हानिदिन पनि सक्छौ । अझ तिमीलाई के आरोप छ भने तिमी नेपालीमै लेख्दा यतै धेरै अंग्रेजी ठोकिदिन्छौ कि अनुवाद गर्ने मानिस नै के अनुवाद गर्ने भनेर ट्वाँ पर्छ । मलाई थाहा छ– तिमी निश्चय पनि त्यसो गर्ने छैनौँ ।
संयोग भनेको यस्तो बब्बाल हुनुपर्दछ । हेर त, त्यो चुच्चो उनले कविता नलेख्दासम्म समतुल्य थियो । कविताको कत्रो तागत, देशको भूगोल साँच्चै नै पो हल्लिन पुग्यो । त्यस उपरान्त, मैले उनलाई थोरै बोल्न र धेरै नहल्लाउन आग्रह गरिसकेको छु ।
मेरो गान्धी दर्शन विषयका परमप्रिय गुरु हुनुहुन्छ- प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र प्रधान । उहाँ तिम्रो भाषामा भन्नुपर्दा बडो भला मानिस हुनुहुन्छ । मैले उहाँलाई सन्तकै कोटीमा राख्ने गरेको छु । मैले उहाँले नै लेखेको 'गीता ज्ञान प्रवेशिका' पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर छपाएको छु । त्यो किताब विमोचन समारोहमा प्रिय गुरु मात्र नभएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै उपस्थित थिए । त्यो पुस्तक मैले तिमीलाई सप्रेम उपहारस्वरुप टक्र्याएको पनि छु । (सायद यो रचनाका लागि त्यो फोटो मैले भेटेँ भने र यो छापिने पोर्टलको सम्पादकले माने भने त्यो छापिएला ।)
मैले खासमा मेरा प्रिय गुरु रामचन्द्र प्रधानलाई किन सम्झेँ भने उहाँले दिल्ली विश्वविद्यालयको स्नातक तहको पाठ्यपुस्तकका लागि अंग्रेजीमा तयार गरेको Raj to Swaraj भन्ने पुस्तकलाई हिन्दीमा आफैँले अनुवाद गर्नुभएको थियो । ती दुवै संस्करण म्याकमिलन पब्लिसरले अद्यापि छापिराख्छ । । मैले निकै आँट गरेर उहाँलाई किन आफैँ अनुवाद गर्ने धृष्टता गर्नुभयो भनेर सोधेको थिएँ । त्यसको उत्तर मैले तिमीलाई यहाँ बताएँ भने तिमी फेरि आफ्ना पुस्तकको अनुवादमा लाग्ने खतरा देखेर त्यो उत्तर यहाँ उल्लेख गर्न चाहिनँ ।
तिम्रा पाठकले तिमीलाई नेपालीमा पढिसकेका कुरालाई फेरि त्यसैको अनुवादमा अलमलिएको देख्न निको मान्ने छैनन् । तिमीलाई थाहा छ, पाठकहरू अचम्मका स्वार्थी हुन्छन् । ती पाठकहरू तिमीलाई अंग्रेजीमा होइन, नेपालीमा पढ्न चाहन्छन् । एउटा रचना नेपालीमा छापिएपछि त्यही नेपाली रचनाको अंग्रेजी versions मा अल्झिएर बसोस् भन्ने मान्दैन्न ।
अंग्रेजीका प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती जसले १९९० अगाडि नै अंग्रेजी उपन्यास लेखेका थिए । उनले 'सिद्धान्तका कुरा' समेत नेपालीमै लेखिदिए । र, अहिलेसम्म उनी बाँकी धेरै लेखन नेपालीमै गर्दै छन् । त्यो उनका लागि घाटा होला तर नेपाली साहित्यका लागि फाइदा भएको छ । तिमीले कुनै दिन अंग्रेजीमा लेख्न थाल्यो भने जो तिमी छुपारुस्तम शैलीमा गरिरहेका हुन पनि सक्छौ, अङ्ग्रेजी साहित्य पक्कै लभनावनबित भै जानेछ, नेपाली पाठक घाटामा रहे पनि ।
प्रिय कुमार 'घाटी',
मलाई कवि कृसु क्षत्रीले न्युयोर्कबाट (जहाँ उनी नेपाली दूतावासमा कार्यरत थिए, त्यहीँको ठेगानाबाट) 'चराहरूको गीत' पठाइदिएका थिए, परम्परागत पत्र मञ्जुषामार्फत । विलयनबादका कुरा गर्छन् उनी । मान्छे कृष्ण धरावासीको लीलालेखन बुझ्ने जाँगर गर्दैनन्, विल्यनबादको चर्चा विस्तारै होई जाला । कृसु दाइले प्रमाणपत्र तहको विद्यार्थी हुँदा मेरो मित्र नवराजमार्फत राष्ट्र बैंकको 'मिरमिरे' मा कविता छापिदिएका थिए । त्यो कविताको शीर्षकसमेत मैले यकिन गरेर सम्झन सक्दिनँ । मिर्मिरेमा बालपत्रिका 'मुना' वा नवयुवकहरूको 'नवयुवा' पछि म पहिलोपटक छापिएको मात्र थिइनँ, कविताबाट मैले पहिलोपटक पारिश्रमिकसमेत पाएको थिएँ । पारिश्रमिकले एक हप्ताभरि दुई जनालाई त्यतिबेलाको मूल्यमा राम्रो म:म खान पुग्थ्यो ।
तिनै कृसु दाइसँग झण्डै दुई दशकपछि न्युयोर्क शहरको थकाली भान्साघरमा हामीले एक अपराह्न म:मबाहेक सबै कुरा खाएर दिवाभोज गरेका थियौँ । तिमी अनुमान गर्न सक्छौ, थकालीबाहेक अनेक नेपाली रेस्टुरेन्ट चहार् न्युयोर्क पुगेर म Statue of Liberty मा तस्वीर सेशन गर्न छुटाएको थिएँ । त्यसमा मेरा मुख्य होस्ट एनआरएनका सल्लाहकारसमेत रहेका श्यामकाजी गुरुङ दाइको करामतले धेरै काम गरेको थियो । ती दिल्दार मनुवासँग तिमीलाई कुनै दिन भेटाउने इच्छा राखेको छु ।
मैले यो साल धेरै पटक बीपी नै पढेँ । श्याम दाइलाई मैले नेपाल हुँदा पठाएको पुस्तक उहाँको न्युयोर्क अपार्टमेन्टमा रहेको सानो लाइब्रेरीबाट विशेष आग्रह गरेर मेरो निवासमा अमेरिका बसुन्जेलका लागि लिएर आएको थिएँ । मैले लेखनीमार्फत बीपी स्मरण गर्न बीपी जयन्ती, स्मृति, मेलमिलाप दिवस केही पनि बाँकी राखिनँ । पौष १ पनि बाँकी रहेन । (ती हिमाल र कान्तिपुर मा छापिए)
के था' ती मनुवाको सानो र आगन्तुकमैत्री लाइब्रेरीमा तिम्रो रुचिको पुस्तकसमेत लुकी बसेको हुन सक्छ । उनले नभए न्युयोर्कको कुख्यात मुसाले एट्लान्टिक महासागरको भन्दा धेरै परको घाट संवादले नपुगेर बङ्गुर संवादसमेत गरिदिने तिनको प्रिय लेखकलाई भनेर केही खजाना सुरक्षित राखिदिएको हुनुपर्दछ । श्याम दाइको अपार्टमेन्टको सुरक्षा र सफाइ यति चुस्त छ कि चतुर मुसाहरूले सेक्युरिटी छिचोल्नकै लागि Sex at Dawn पढेको तिमीलाई उपहार टक्र्याउन Sex with Presidents भन्ने पुस्तक रोजेका छन् । मुसा मानुष पढिसकेपछि तिमीलाई पनि न्युयोर्क शहरमा आएर यहाँका ख्यात नाम मुसासँग मुसा संवाद गर्ने कस्तो रहर होला । सबै बन्दोबस्ती यहाँका मुसाहरू गर्दै छन् । तिमी त्यसै overrated भएका होइनौ ।
त्यस्तै, अर्का बहुरंगबादी कवि धर्मेन्द्र नेम्वाङले मलाई 'मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ' भन्ने पुस्तक एक कपी नभएर दुई कपी fedex गरी पठाइदिएका थिए । पुस्तक पढिसकेपछि मैले समीक्षा कहाँ लेखूँ भनेर उनलाई मजाकमा सोधेको थिएँ । त्यो पुस्तकको समीक्षा र पुस्तकबारेको लेख कान्तिपुरलगायत अन्यत्र छापिएको पनि थियो । उनले मलाई ठाटमै भनेका थिए, 'न्युयोर्क टाइम्समा लेखिदिनू ।' न्युयोर्क टाइम्समा कुनै दिन उनको साहित्यको, नेपाली साहित्यको चर्चा होला । त्यसको कामना गरौँ ।
उनले जसै 'मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ' भन्ने पुस्तक निकाले, देशको नक्सा साँच्चै हलियो पनि । धेरै दशक हराइरहेको लिम्पियाधुरा नक्सामा पुनः देखा पर्‍यो, अहिले फेरि हराउन खोज्दै छ । संयोग भनेको यस्तो बब्बाल हुनुपर्दछ । हेर त, त्यो चुच्चो उनले कविता नलेख्दासम्म समतुल्य थियो । कविताको कत्रो तागत, देशको भूगोल साँच्चै नै पो हल्लिन पुग्यो । त्यस उपरान्त, मैले उनलाई थोरै बोल्न र धेरै नहल्लाउन आग्रह गरिसकेको छु ।
श्याम दाइको अपार्टमेन्टको सुरक्षा र सफाइ यति चुस्त छ कि चतुर मुसाहरूले सेक्युरिटी छिचोल्नकै लागि Sex at Dawn पढेको तिमीलाई उपहार टक्र्याउन Sex with Presidents भन्ने पुस्तक रोजेका छन् ।
भूपि शेरचनका लागि भुइँचालो देख्ने कत्रो रहर थियो । उनले कविता नै लेखेका थिए– म भुइँचालोपछि जन्मेको मान्छे मलाई भुइँचालो देख्ने ठूलो रहर छ भन्ने या यस्तै शीर्षकमा । २०४५ सालको भुइँचालोले उनको मन तृप्त पारेन कि ! तर, विडम्बना तिमी, हामीले यति धेरै राजनीतिक र प्राकृतिक भुइँचालोको सामना गर्नुपर्‍यो, भुइँचालो सामान्य भएको छ ।
तिम्रा लेखनीमार्फत सुटआउट एट झम्सिखेलमा नेताको नभएर मन्त्रीको हत्या गरिदियौ । तिमीलाई मन्त्रीको हत्याले नपुगेर पाटन दरबार स्क्वायरमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वस्त्र बनाएर कपडा उतारिदियौ । त्यो मुस्तन्ड र धुन्धुकारी प्रधानमन्त्री जबसम्म ऊजस्तै उसको अंगरक्षक नाङ्गो हुँदैन, तबसम्म कुर्सी नछोड्ने मुडमा छ । तिमीले राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको धेरै पटक गला निमोठेका छौ, (तिनीहरूसँग विद्रुप सम्भोग गरेका छौ), online रंगाएका पनि छौ, र पनि तिनीहरूले सच्चिने सुरसार गरेका छैनन् ।
यो नयाँ वर्षको सन्ध्यामा त्यो 'पोर्न लाइन'उन्मुख राजनीतिबाट देशलाई निकाल्ने तिम्रो उत्कट चाहना पूरा होस् । अनि political parties animal हरू political animal मात्र रहन सकून् । तर ध्रुवीकरण यति छ कि तिमीले तिनका उपर लेखनीमा अझै हिंस्रक हुनुपर्नेछ । हाय रे !
तिमीले सालभरि मेहनतपूर्वक जम्मा गरेर, जम्मा गर्न लगाएर पढेका पुस्तकको सूची (तिमीले यति मात्रै पढ्यौ होला भनेर मैले पत्याउदिनँ) । तर, पढेकामध्ये यतिचाहिँ तिमीले सार्वजनिक गर्न लायक ठान्यौ ।
तिमीले यति मात्रै सार्वजनिक गर्न लायक ठान्नु पनि बाँकी अरुलाई चुनौतीको कुरा हो । किनकि सबैले के पढिरहेका छन्, सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्दैनन् र बाँकीमा तिमीले सार्वजनिक गरेका पुस्तक संकलन गरेर, खरिद गरेर पढ्ने सामर्थ्य नरहन पनि सक्छ ।
यसरी तिमीले आफ्ना पाठकहरू र अरुलाई पनि विलखबन्दमा पार्नु हुन्थेन । अब मैले हुन्थेन भनेर केही जोर चल्ने कुरा छैन, तिमीले ठोकिदी' नै त सक्यौ !
प्रकाशनपूर्व नै तहल्का मच्चाएको कल्पग्रन्थले अझै भव्य सफलता चुमोस् भन्ने कामनासहित ।
सधैं कुमार रहनू, प्रिय लेखक नगर 'घाटी' ।
तिम्रो मनप्रिय पाठक
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३१, २०७७, ०६:५८:००